sawaahkar — Steemkr
goldbloger-236 in artzone
htangyasharr parsanyya . darhar ao kay dar htainsharr maae ... um, parpell . aasopar sutaysemyarr naeelammyarrsuuthoet devel twin shisai saw aakyaanpyu kya par
hconehcamhcaitsayyk virtual aasan lhaine myarr hpammi aamhaantakaal lhaine tan poe mha htotelote suuthoeteat sain hkyaar laat nhaine yhain hkyinn nhaint aamhaantakaallaat crack saeetaahkar graphed aahkar . 50 pay aakwaraawayy k nay kyarrsi 40 taitnarre mine mhar rwaelyarrnaytae dejaal htarautkarr eata sanatoe aakyaal mha aakyamhpyinn nyemyaha sai selllwanhcahkaekyasai neeparr tuunye . i lotengaann kolaattwae application ko hkyethkyinn
sutaysemyarr pyeesarr so hkaesaw aararko saatsay pya hkaesai k i aahkyetmhar pyu mi hkaesai .abhaalaarar puuhpaungg aaatkwal pyeenout laat hkout sait aatwat nay raitsaw disproof- noutpine twaeshihkyet myarr kaw? sar taithcatetaitpine mhaan parsai, puuhpaungg pyaokya, darpaymaae:
hpyitpartaal . hpyitnine hpyit larmaeet aaatkwal myarraatwat kyaar nhaitsaal minait shoetmahote dar kyount aasait k puuhpaungg hpaantee kyaanraitsuu suutwayko hkyaae htwinraan tribonucleation kyaar karl hpyiteat . noutsone shhoetwhaatsaannkyaal- bhaallo nu hpyithcain ko nineaaung m hpyitninesaw aamhaantakaal aalwalkuusone t u taee kyaal laung- hpyitpartaal tae aasan k htotelote ninesai . taisell acoustic hpiaarr nyemyahahkyinn har puuhpaungg pyaokya aamyannhuann k hpyitpyet-The saw patyawanya k ngyaya swae hkyawwat saw aaroe paatwaannkyinko payyhtarrsany enclosing aamellsarrk 83 daat hce bhaal yuunait routshi tae aaatkwal htoteloteraan lonew hpyitninehkyay kyaungg pya s par . solosaimhar aasopar
aasait mawdaal tait u laee kyaungg hpw kwayarr . m pyany hconeshin MRIs nay hpyint twaeshi hkanr hphoet noutkwalmha aaloneaalout puuhpaungg htwathkwar nayhcain rotetaraat sai, puuhpaungg eat kyaone tait u ko aalwaltakuu kwarr nongya saw aasan
hconehcamhcaitsayy hkyinn, Rayleigh-Presset nyemyahahkyinn aahpyit luusimyarr raearar paw taithcatetaitpine tae ponesaynaeeaarrkoe "incompressible aarai taithku aasonemae hkandharko htellmhar tait u aalainn sone puuhpaungg eat dine n mait aotehkyaote . " suuthoet k suuthoet mawdaalmha Rayleigh-Presset saatpyawwsai saeet aahkarnhaint suuthoet crack saeet aahkar aamhaantakaal laat shoet pyaunggshwae naykyasai saw lam aatwat suuthoetraeko virtual laat pyaungg rwae, sain hkyaar puuhpaungg sang lyaw saw aasan htotelote maallhoet pell htokaeshoetsaw lam aatwat pyaokya . detot pyaဿnar ko laat yaar bhaat, hpyayshinn? aatawlayy mahoteparbhuu . luu aarrlone thoetsai hconehcamhcaitsayysaeet 1971
kyaunggko virtual laat hkout sait aasonepyuhkyinn, sutayse hthoetnout aarai aatwat bat ti jan koahcine aahkell myetnharpyin myarrakyarr aasaataaswalmyarr tribonucleation-The hkyamhaathkyinn nhaint kyay kwal aahpyit luusimyarr lotengaannhcain simulated .alha ny ponehcan myarraatwat sha saw nayrarmyarr aatwat pate mi nay saeet hcayy aatwat shothkya hpiaarr mha u saungsaeet MCP puutwal touch nhaint seehkyarr aarrlone karl aaroe thoetsaia. deaasan ammo aasopar laat hkout sait shoet tainsaung htarrpyee pyeetarnae sain sell k paithkaat hphoet shisai . htoshoet hpw hcya pone ko laelarraan,
aamhuko taishi) ko laat hkout sait- kwalaaat hcarpay tait u aamyan pyanlaisonesaut nhaint aatuu pyinsait- hcatainhphoet . 1939 hkunhaittwin u saung seaore kwalaaat san ko darhkaw articular lwhaatpayyraan- aahkar puutwal aahkyahoet htaw intmhar taithku shoetmahote aahkyahoetsaw degare mha hkyane nyhai shoetmahote pyaunggshwae pyeenout aasaitwaannkyin fibrous sayy taw ng tait tainnkyaut eat ralad kyount painhpyitsai . 1947 hkunhaittwin, hto aasait suuthoetrae ponemhaan aakwaraawayyhtaat kyawlwan. pyaunggshwae kya
pyammyaha aarr hpyint hpwin 200 mite hk ro metar- shoetmahote tait melemetareat 200 tahtaung eat tait u hkyinn waat shisai, kyaungg sha nine shipartaal . aellde aahcarr, suuthoet aasait, aarai nhaint puuhpaungg nhaint naeelamtway aamyoemyoe paungghcaut aatwat hto suuaapaungg thoeteat saathcautmhu tway tuuaaung hpaanteenae manipulate mha hkwin pyu maallhoet tait sain hkyaar ponehcan tehtwin htotelote ninehkaesai . pahtam u sone hkyaylhamtatiy metacarpophalangeal (MCP) k pot ut htotelote aahcaitaamhaan aalote m laatnyhaoe myarreat aahkyayhcite hcahkaannmhar puutwal t eat kwanpyauutar mawdaal taisouthphoet hpyittaal .
ngwaypamarn ko hpaansainn tawmuueat . 2015 hkunhaittwin, shoetsaw, kanaydar nhaint sya hc tyay lya k nay sutayse tait u aapyipyisinerar aahpwal k suuthoet pain aaatkwal pyeenout puutwal aatwat puuhpaungg saatlaat shikyaungg pya s ninehphoet sanlite pae tain ritehkaatmhu poneriut aasonepyu hkae sany aatwat laelarmhu taithku htoteway hkaepartaal . suuthoet pop m htarr bhuusorain bhaallo suuthoet suunyan san hcay salell? mayyhkwann aahkyayhkya raan, laatshi sutaysemyarr har suuthoetrae aalotemhar kwalpyarr hkyarrnarr saw lam shoet rout kyaeat . aahcawpine laelarmhumyarr aatwat-raunghkyi x bhaallout kaunggkaunggtaithku MRI shoetmahote mha k antsaat image
darpaymaae k laat hkout sait- kwalaaat laalkwin lideat University mha sutayse aahpwal tait hpwal laat hkout sait-kwalaaat encloses nhaint aasait karkwal payysai saw hcayy aatwat puuhpaungg eat pyaokya kyount hpyitratae kyaungg htotepyan kyay nyar hkaesai saeet aahkar yainneat yuu re kar yahkuaahkyanetwinhkaekyaungg 1971 hkunhaittwin hpyithkaesai . aasopar seaore puuhpaungg aarut pawlar hkae sany hkae kya pyee pahtam u sone-form ko pyanlai ramaallhoet aakyaanpyuhkyinn, aasait aaat htarrpyee tae laat hkout saitminait 20 pyammyahaabhhoeta re- aaat r ninemhar mahotebhuu, aahtuu s hpyint kataeek aasi tait uahkyahoet saw
darpaymaae ( iamhu aararko swarr kaeshoet) hone honeahcainasaat kataeek aahkyayaatain swaynwayhkae s nyya . aahkyahoetsaw hpaanteemhu hcain hcarr tway hkaw aasaittaithku sain hkyaar mawdaal mha kyaayyjuutainparsai, shoetsaw, dekihchcako aahkyayhkya nayhtinehkae kya pay mai . hcakkuu- taithku kaallehpoeneeyarr shi hcataannhphoetd takkasolmha sutaysemyarreat pair t hconenhaint Palaiseau aatwatsai Ecole Polytechnique eat hcarrayysararmyarr, ( hotekae, htoshoetsaw
hkway pout hc kyawantawthoet ko aarai pyaw- darpaymaae kyanawthoet bharpellhpyithpyitahpyay hkyin kya parbhuu m solo aaungabhaal kyount h nayhkyinn, kuuhcaat taat hpyitparsai sippan raeasayy aahpwalabhaal kyount naatnellsawarar- hpyayshinn bhhoet aaniner hkanr hphoet m so su mashipar . suuthoetaarr naehcain pahayli mha laat hkout sait- kwalaaat eat dekihchcako htaeet par .abhaal kyawwng aatiaakya, hkandharko raeasayy ngaal sone aaroe sait aahkyahoethtokaeshoetsaw outsized raat kaat htoteloteraan saintsalell aahkutot noutsonemhar sippan aahcerainhkanhcarmyarr aatwat laelarmhu taithku shinnpyahkyet payyparsai . darhar pahtam usone 1971 hkunhait sakaeshoet shilyarrlwanhkaetae posited hkaetae seaore rae,
sawaahkar aasan k kwalaaat laatmhaat taitshuu myarrtwin tone hkar mhu kyount hpyitratae hkae seaore mha lam ko payyeat . VideoCOMING UP Play ... saint kyannmarrayy ko sanya shngyathaay5lwalkuunaeelamtw
ထိုသို့ဖွစျပုံကိုလေ့လာရန်, စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း, Rayleigh-Presset ညီမျှခြင်းအဖြစ်လူသိများရဲ့အရာပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဲ့ပုံသေနည်းအားကိုး "incompressible အရည်တစ်ခုအဆုံးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးအလင်းဆုံပူဖောင်း၏ဒိုင်းနမစ်အုပ်ချုပ်။ "
!အလုံအလောက်ပူဖောင်းထွက်ခွာနေစဉ်ရုတ်တရက်သည်, ပူဖောင်း၏ကျုံ့တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူကွားနိုငျသောအသံထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာမည့်အက်ကွဲများအတွက်ကြာနှစ်ဆယ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒါကြောင့်အသစ်ကပူဖောင်းဖန်တီးကျန်ရစ်သူသူတွေကိုချဲ့ထွင်ရန် tribonucleation ကြာကာလဖြစ်၏။ နောက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်-ဘယ်လိုဏုဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်မဖြစ်နိုင်သောအမှန်တကယ်အလွယ်ကူဆုံးတဦးတည်းကျယ်လောင်-ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အသံကထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ တည်ဆဲ acoustic ဖိအားညီမျှခြင်းဟာပူဖောင်းပြိုကျအမြန်နှုန်းကဖြစ်ပျက်-The သောပတျဝနျးကငျြသွေ့ခြောက်သောအရိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးထားသည့် enclosing အမဲသားက 83 ဒက်စီဘယ်ယူနစ်ရောက်ရှိတဲ့အက်ကွဲထုတ်လုပ်ရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းပြသပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးက virtual အသံလှိုင်းများဖမ်းမိအမှန်တကယ်လှိုင်းတံပိုးမှထုတ်လုပ်သူတို့၏သင်္ချာလက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လက် crack သည့်အခါ graphed အခါ။ 50 ပေအကွာအဝေးကနေကြားသိ 40 တစ်နာရီမိုင်မှာရွေ့လျားနေတဲ့ဒီဇယ်ထရပ်ကား၏အသံအတိုးအကျယ်မှအကြမ်းဖျင်းညီမျှသည်သဲလွန်စခဲ့ကြသည် နီးပါးတူညီ။ ဤလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့ application ကိုချက်ချင်းထငျရှားပါသညျ။ ဒါဟာအိုကေဒါထင်ရှားမယ့် ... um, ပါပဲ။ အဆိုပါသုတေသီများနည်းလမ်းများသူတို့ devel တွင်ရှိသည်သောအကြံပြုကြပါ
သူတို့ကသူတို့မော်ဒယ်မှ Rayleigh-Presset ဆက်ပြောသည်သည့်အခါနှင့် သူတို့ crack သည့်အခါအမှန်တကယ်လက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်သောလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ကို virtual လက်ပြောင်းရွေ့, သင်္ချာပူဖောင်းသင့်လျော်သောအသံထုတ်လုပ်မယ်လို့ပဲထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြိုကျ။ ဒီတော့ပြဿနာကိုလက်ျာဘက်, ဖြေရှင်း? အတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် 1971 သုတေသီများပြီးသားဆိုခဲ့သောအရာကိုသက်သေပြခဲ့သည်ကဤအချက်မှာပြုမိခဲ့သည်။ အဘယ်အရာပူဖောင်းအက်ကွဲပြီးနောက်လက်ခေါက်ဆစ်အတွက်နေရစ်သော disproof-နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်များကော? သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှန်ပါသည်, ပူဖောင်းပြိုကျ, ဒါပေမယ့်: အသစ်မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းကြောင်းဖွကွေား။ မပြည့်စုံလျှင် MRIs နေဖြင့်တွေ့ရှိခံရဖို့နောက်ကွယ်မှ
များ၏အခြေစိုက်စခန်းမှာပူးတွဲတ၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကြောင်းကို virtual လက်ခေါက်ဆစ်အသုံးပြုခြင်း, သုတေသီထို့နောက်အရည်အတွက်ဗတ္တိဇံကိုအစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်များအကြားအဆက်အသွယ်များ tribonucleation-The ချမှတ်ခြင်းနှင့်ကြေကွဲအဖြစ်လူသိများလုပ်ငန်းစဉ် simulated ။ အလှည့်ပုံစံများအတွက်သှသောနေရာများအတွက်ပိတ်မိနေသည့်စေးအတွက်လျှော့ချဖိအားမှဦးဆောင်သည့် MCP ပူးတွဲ touch နှင့်သီးခြားအားလုံးကာလ၌အရိုးတို့သည်အ။ ဒီအသံ ammo အဆိုပါလက်ခေါက်ဆစ်သို့တင်ဆောင်ထားပြီးပြီးတာနဲ့သင်ဆဲကပစ်ခတ်ဖို့ရှိသည်။
လက်ရှိသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်မှာကွဲပြားခြားနားသောလမ်းသို့ရောက်ကြ၏။ အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအတွက်-ရောင်ခြည် x ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းတစ်ခု MRI သို့မဟုတ်မှကန့်သတ် image ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖွင့် 200 မိုက်ခရိုမီတာ-သို့မဟုတ်တစ်မီလီမီတာ၏ 200 တထောင်၏တစ်ဦးချင်းဝက်ရှိသည်, ကြောင်းသှနိုင်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစား, သူတို့အဆစ်, အရည်နှင့်ပူဖောင်းနှင့်နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်အတွက်ထိုသူအပေါင်းတို့၏ဆက်စပ်မှုတွေတူအောင်ဖန်တီးနဲ့ manipulate မှခွင့်ပြုမယ်လို့တစ်သင်္ချာပုံစံတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတတိယ metacarpophalangeal (MCP) ကပေါ့ပ်ထုတ်လုပ်အစစ်အမှန်အလုပ်မလက်ညှိုး
ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သည့်အခါယင်း၏ယူရီကာယခုအချိန်တွင်ခဲ့ကြောင်း 1971 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသီအိုရီပူဖောင်းအာပ်ပေါ်လာခဲ့သည့်ခဲ့ကြပြီးပထမဦးဆုံး-form ကိုပြန်လည်ရမယ်လို့အကြံပြုခြင်း, အသစ်အက်ထားပြီးတဲ့လက်ခေါက်ဆစ်မိနစ် 20 ပျမ်းမျှအဘို့အ re-အက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, အထူးသဖြင့်ကတည်းကအသိတစ်ဦးအခြို့သောငွေပမာဏကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 2015 ခုနှစ်တွင်, သို့သော်, ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျကနေသုတေသီတစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကသူတို့ပင်အက်ကွဲပြီးနောက်ပူးတွဲ
စတင်ဖို့။ 1939 ခုနှစ်တွင်ဦးဆောင်သီအိုရီကွဲအက်သံကိုဒါခေါ် articular လွှတ်ပေးရန်-အခါပူးတွဲအချို့ထောင့်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့သောဒီဂရီမှချိန်ညှိသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်အဆစ်ဝန်းကျင် fibrous ဆေးတောင့်တစ်တင်းကျပ်၏ရလဒ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ 1947 ခုနှစ်တွင်, ထိုအဆစ်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်. ပြောင်းရွှေ့ကြသောအခါအသံကကွဲအက်လက်မှတ်တစ်ရှူးများတွင်တုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့သီအိုရီမှလမ်းကိုပေး၏။ VideoCOMING UP Play ... သင့်ကျန်းမာရေးကိုသနျ့ရှငျးတှေ5လွယ်ကူနည်းလမ်းတွေ ဒါပေမယ့်ကလက်ခေါက်ဆစ်-ကွဲအက်လယ်ကွင်းလိဒ်၏ University မှ
ပါသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး 1971 ခုနှစ်သကဲ့သို့ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ posited ခဲ့တဲ့သီအိုရီရဲ့, ဒါပေမယ့် (ဤအမှုအရာကိုသွားကဲ့သို့) ဟုန်းဟုန်းအစဉ်အဆက်ကတည်းကအခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့သညျ။ အချို့သောဖန်တီးမှုစဉ်းစားတွေးခေါ်အသစ်တစ်ခုသင်္ချာမော်ဒယ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သို့သော်, ဒီကိစ္စကိုအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပေမည်။ စက္ကူ-တစ်ခုကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများ၏ pair တစုံနှင့် Palaiseau အတွက်သည် Ecole Polytechnique ၏စာရေးဆရာများ, (ဟုတ်ကဲ့, ထိုသို့သောအမှုကိုတည်ရှိ) ကိုလက်ခေါက်ဆစ်-ကွဲအက်
ခွေးပေါက်စကျွန်တော်တို့ကိုအရည်ပျော်-ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေချင်ကြပါဘူးမဆိုလိုအောင်အဘယ်ကြောင့်ဟနေခြင်း, ကူးစက်တတ်ဖြစ်ပါသည်သိပ္ပံရဲ့အသေးအဖွဲအဘယ်ကြောင့်နက်နဲသောအရာ-ဖြေရှင်းဘို့အနိုင်ရခံရဖို့မဆိုဆုမရှိပါ။ သူတို့အားနေ့စဉ်ပဟေဠိမှလက်ခေါက်ဆစ်-ကွဲအက်၏ဒီကိစ္စကိုထည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်အတိအကျ, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးအရိုးဆစ်အချို့ထိုကဲ့သို့သော outsized ရက်ကက်ထုတ်လုပ်ရန်သင့်သလဲ အခုတော့နောက်ဆုံးမှာသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုရှင်းပြချက်ပေး
သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လက်ခေါက်ဆစ်-ကွဲအက် encloses နှင့်အဆစ်ကာကွယ်ပေးသည်သောစေးအတွက်ပူဖောင်း၏ပြိုကျကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း
အတွက်ပူဖောင်းဆက်လက်ရှိကြောင်းပြသနိုင်ဖို့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ pop မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသူတို့ဆူညံသံစေသလဲ? မေးခွန်းအခြေချရန်,